ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: December 2008
အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ .......... ကိုရုပ်ဆိုး
ACTION Kamma - ကမ္မ
IF ...... အကယ်၍သာ
ဗိုလ် ... ကျား ... သေနတ်
Tell my why ..........
Nick Vujicic (သို့) ဘ၀ကို စိန်ခေါ်သူ
၂၀၀၉-ခုနှစ် ပွဲတော်ရက်များနှင့် မြန်မာပြက္ခဒိန်
အမေ (သို့) ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့ ချစ်လှစွာသော အမေသို့
“ရုပ်ဆိုး”လည်းလေ … လောကီသားပေမို့
မပျော်ရွှင်နိုင်တာက ကျနော့ ဘ၀
ကျနော် ............ ၁၄ နှစ်ကြာလက်တွဲလာတဲ့ ဒီဘ၀
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:47 PM 12 ထင်မြင်ချက်(များ)
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:45 AM6ထင်မြင်ချက်(များ)
ကမ္မ - ပြုမူခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း ကံ၊ အမှုကိစ္စ။
၁။ အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်စေတတ်သော ကုသိုလ်ကံနှင့်
၂။ အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေတတ်သော အကုသိုလ်ကံဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။
ထိုကုသိုလ်ကံ, အကုသိုလ်ကံသည်လည်း -
(၁) ကိုယ်ဖြင့် ပြုလုပ်မှု ကာယကံ၊
(၂) နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုမှု ၀စီကံ၊
(၃) စိတ်ဖြင့် ကြံစည်မှု မနောကံ - ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။
Deed, volitional action
Two types of action may be discerned:
(1) Action which destroys the unbeneficial and produces the beneficial; kusala kamma
(2) Action which destroys the beneficial and produces the unbeneficial; akusala kamma
There are three kinds of action:
(1) Physical action – k¬¬āya kamma;
(2) Verbal action – vacī kamma;
(3) Mental action – mano kamma.
မိလိန္ဒမင်း အမေးပုစ္ဆာ -
”အာယတန ငါးပါးတို့သည် ကံကြောင့် ဖြစ်ကြရသည်ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသလား၊ မှန်လျှင် ကံတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်သလား၊ ကံအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ရသလား ဘုရား”
အရှင် နာဂသေန အဖြေ -
”မင်းကြီး၊ စက္ခုအာရုံ (စက္ခာယတန) အစရှိတဲ့ အာယတနတို့ဟာ အထူးထူးသော ကံ၊ အသီးသီးသော ကံကြောင့် ဖြစ်ကြရတာ၊ ကံ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်တာ၊ ကံ တစ်မျိုးတည်းကြောင့် ဖြစ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး”
”အရှင်ဘုရား၊ နားလည်လွယ်အောင် ဥပမာနှင့် ရှင်းပြပါဦး”
”မင်းကြီး၊ ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ၊ လယ်ကွက်တစ်ကွက်တည်းမှာ မတူတဲ့ ငါးမျိုးသော မျိုးစေ့တွေကို စိုက်ပျိုးတယ် ဆိုပါစို့၊ ဒီလို မျိုးစေ့ကွဲ အမျိုးမျိုး စိုက်လျှင် ထိုမျိုးစေ့မှ အမျိုးမျိုးသော အပင်ပေါက်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသော အသီး သီးကြတယ် မဟုတ်လား”
”မှန်ပါတယ် ဘုရား၊ မျိုးစေ့မတူလျှင် မတူသော သစ်ပင်များ ပေါက်ပြီး၊ မတူသော အသီး သီးကြမှာပါပဲ ဘုရား”
”ဒီအတိုင်းပါပဲ မင်းကြီး၊ ငါးပါးသော အာယတနများဖြစ်ကြတဲ့ စက္ခု သောတ ဃာန ဇိဝှာ ကာယ ဆိုတာတွေဟာလည်း ကံ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်လာကြတာပါပဲ။”
”အရှင်ဘုရား ဘာ အကြောင်းကြောင့် လူ ခပ်သိမ်းတို့ဟာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူဖြစ်ကြရပါသလဲ၊ တချို့လူတွေဟာ အသက်တိုကြပါတယ်၊ အချို့ လူတို့ဟာ အသက် ရှည်ကြပါတယ်၊ အချို့လူတွေကတော့ အနာရောဂါ များကြပါတယ်၊ တချို့မှာ အနာရောဂါများ မဖြစ်ကြပါ၊ တချို့လူများမှာ လှသော အဆင်းမရှိဘဲ၊ တချို့ကျတော့ အဆင်း လှကြပါတယ်၊ တချို့မှာ တန်ခိုး သြဇာ နည်းပါးကြပါတယ်၊ တချို့မှာတော့ တန်ခိုး သြဇာ ကြီးမား ကြပါတယ်၊ တချို့မှာ ဥစ္စာနည်းတယ်၊ တချို့မှာတော့ ဥစ္စာတွေ ပေါများကြတယ်၊ တချို့က အမျိုးမြတ်ကြတယ်၊ တချို့ကတော့ အမျိုးယုတ်ညံ့ကြပါတယ်၊ တချို့မှာ ပညာနည်းကြပြီး၊ တချို့မှာ ပညာ ထက်မြက်ကြပါတယ် ဘုရား၊ ဒီလို လူမှာ မညီမမျှ ဖြစ်နေရတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဘုရား”
”မင်းကြီး သစ်ပင်တွေကို ကြည့်ပါလား၊ ဘာကြောင့် သစ်ပင်တွေဟာ မတူဘဲ (မညီမညွတ်) ဖြစ်နေကြရသလဲ၊ အချို့သစ်ပင်တွေက ချဉ်ကြတယ်၊ တချို့သစ်ပင်က ငန်တယ်၊ တချို့က ခါးတယ်၊ တချို့က ချိုတယ်၊ တချို့က ဖန်တယ်၊ တချို့က စပ်တယ်၊ အဲဒါ ဘာကြောင့် မတူကြသလဲ မင်းကြီးရဲ့”
”အရှင်ဘုရား တပည့်တော် သဘောပေါက်ပါပြီ၊ မျိုးစေ့ခြင်း မတူကြလို့ပဲပေါ့ ဘုရား”
”ဟုတ်တာပ တကာတော်မင်းကြီး၊ ဒီအတိုင်းသာပ။ လူသတ္တ၀ါတွေမှာလည်း ကံတရား (ကံမျိုးစေ့)က မတူကြတဲ့ အကြောင်းကံတွေ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းကြောင့် အသက်တိုသူ တို၊ အသက်ရှည်သူ ရှည်၊ အနာရောဂါ များသူများ၊ အနာရောဂါ ကင်းသူ ကင်း၊ အဆင်း မလှသူက မလှ၊ အဆင်း လှသူက လှ၊ တန်ခိုးနည်းသူ နည်း၊ တန်ခိုးကြီးသူ ကြီး၊ ဥစ္စာနည်းသူ နည်း၊ ဥစ္စာများသူ များ၊ အမျိုးယုတ်သူ ယုတ်၊ အမျိုးမြတ်သူ မြတ်၊ ပညာမဲ့သူ မဲ့၊ ပညာရှိသူ ရှိ အသီးသီး ဖြစ်နေကြရတာပဲ၊ ဒီလို အခြင်းအရာအားဖြင့် ၁၄ မျိုး ကွဲပြားနေကြတာဟာ ကံကြောင့်ပဲလို့ မှတ်ပါ မင်းကြီး”
အသက် တိုခြင်း၊ ရှည်ခြင်း
ဤလောက၌ သူတစ်ပါး အသက်ကို သတ်လေ့ရှိသူသည် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အသက်တိုရ၏။
အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိသူသည် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အသက်ရှည်၏။
အနာရောဂါ များခြင်း၊ နည်းခြင်း
ဤလောက၌ သတ္တ၀ါကို ညှင်းဆဲလေ့ရှိသူသည် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အနာရောဂါများ၏။
သတ္တ၀ါကို ညှင်းဆဲလေ့မရှိဘဲ သနားကြင်နာလေ့ရှိသူသည် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အနာရောဂါကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာရေး ကောင်းတတ်၏။
အဆင်း မလှခြင်း၊ အဆင်း လှခြင်း
ဤလောက၌ အမျက်ဒေါသ ကြီးသောသူသည် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန် တတ်၏။
ဒေါသမကြီးသူသည် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အဆင်းလှ၏။
အခြံအရံ နည်းခြင်း၊ များခြင်း
ဤလောက၌ သူတစ်ပါး ကောင်းစားသည်ကို အနာလို ငြူစူခြင်း (ဣဿာ) တရားအားကြီးသူသည် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အခြံအရံနည်းပါးရ၏။
သူတစ်ပါး ကောင်းစားသည်ကို မနာလို ငြူစူခြင်း ကင်းသူသည် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အခြံအရံ ပေါများရ၏။
ဥစ္စာ နည်းပါးခြင်း၊ ဥစ္စာ ပေါများခြင်း
ဤလောက၌ ဒါနမပြုဘဲ မစ္ဆရိယ အားကြီးသူသည် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ နည်းပါး၏။
ဒါနပြုလေ့ရှိသူသည် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပေါများကြွယ်ဝ၏။
အမျိုး ယုတ်ခြင်း၊ မြတ်ခြင်း
ဤလောက၌ ခက်ထန် ထောင်လွှား မာနတရားအားကြီးသူသည် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အမျိုးယုတ်ညံ့၏။
မခက်ထန် မထောင်လွှားဘဲ နိဝါတတရား ရှိသူသည် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် အမျိုးမြတ်သူ ဖြစ်ရ၏။
ပညာ မဲ့ခြင်း၊ ရှိခြင်း
ဤလောက၌ “အဘယ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားပါနည်း၊ အဘယ်တရားသည် အကုသိုလ် တရားပါနည်း” စသည်ဖြင့် သမဏ ဗြဟ္မဏတို့ထံ၌ မမေးမြန်းသူသည် ပြုသင့်သည်ကို မပြု၊ မပြုသင့်သည်ကို ပြုမိခြင်းကြောင့် သေသည်မှနောက်၌ ငရဲသို့ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ ငရဲသို့မရောက်ဘဲ လူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် ပညာမဲ့သူ ဖြစ်ရ၏။
ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် စသည်တို့ကို မေးမြန်းလေ့ရှိသူသည် မပြုသင့်သည်ကို ရှောင်ကြဉ်၍ ပြုသင့်သည်ကို ပြုခြင်းကြောင့် သေသည်မှ နောက်၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရတတ်၏။ အကယ်၍ နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲ လူ့ပြည်သို့ရောက်ခဲ့လျှင် ပညာကြီးသူ ဖြစ်ရ၏။
PDF ဖိုင်ဖြင့် ရယူလိုပါက - Download
မဇျွိမနိကာယ်၊ ဥပရိပဏ္ဏာသ မြန်မာပြန်၊
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:29 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
အကယ်၍သာ ကျနော်ဟာ ...?
အကယ်၍သာ သူဟာ ...?
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:43 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
“ဗိုလ် .. ကျား .. သေနတ်
ဗိုလ် လုပ်ချင်တဲ့ လူတွေကော
ကျား ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေကော
ဗိုလ် .. ကျား .. သေနတ်
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပဲလား ....?
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:38 PM 8 ထင်မြင်ချက်(များ)
Tell Me Why (with Lyrics)
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:24 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
YES YOU CAN!! :-) Check this out! ...
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:46 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
အခုတလော ...... ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆီက မင်္ဂလာသတင်းတွေကော၊ အ,မင်္ဂလာသတင်းတွေပါ ဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်။ ဟေ့ကောင် ... ဘယ်သူတော့ဖြင့်ဆုံးသွားပြီကွ။ ဘယ်သူ ဘယ်နေ့ကလေ ဆုံးသွားတာ မင်းမသိလိုက်ဘူးလား၊ ငါတို့ သူငယ်ချင်း ဟိုကောင်မလေးလေ ..ဆုံးသွားပြန်ပြီကွ။
အင်း ..... ဘာလိုလိုနဲ့ သေခြင်းတရားဆိုတာ ဘယ်အရွယ်မဆို တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပြနေသလိုပဲ။ သတင်းစာထဲမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေ ဆုံးပါးသွားတာ မြင်နေ၊ တွေ့နေရပေမယ့် ... ကိုယ်နဲ့ မခင်၊ မချစ်ကြတော့လည်း ဒီလိုပဲ သတင်းအမှတ်နဲ့ ဖတ်လိုက်တာပဲ။
အခုလို သံယောဇဉ်ရှိတဲ့လူတွေ၊ ခင်ခင်မင်မင် ပေါင်းလာခဲ့တဲ့လူတွေ၊ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ခွဲခွါသွားတဲ့အခါ ... သြော် . ငါ့အလှည့်လည်း ဘယ်တော့လည်းလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ “မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး”ရဲ့ “သတိရတမ်းတ သံဝေဂ”လေးကို သတိရမိတယ်။
ငါကအမှန် မလိုက်ချင်သေးပါ ....။
ဖွေရှာသိုမှီး ပစ္စည်းရွှေငွေ အထွေထွေနှင့်
ငါ့အိမ်၊ ငါ့မြေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရတနာကို
ငါကအမှန် မစွန့်ချင်သေးပါ ....။
(သြော်) မလိုက်မနေ နေချင်မရ
ကံကစီမံ ငါ့ကံအတိုင်း အချိန်းပိုင်းလာ ခိုနားရာမှ
ပြန်လည်ကာလှမ်း ဘ၀ကြမ်းပြင် ခရီးနှင်ပြီ
ငါသည်အရင် သွားနှင့်ပြီ ....။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:12 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : ဝေမျှခြင်း, ထွေကာလီကာ မှတ်စု
ကျနော့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ၂၀၀၉-ခုနှစ် မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပွဲတော်ရက်လေးများနဲ့ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးကို ဝေမျှပေးချင်တယ်ဗျ။
မြန်မာပြက္ခဒိန်က ကျနော် ၂၀၀၇-ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က ၂၀၀၉-ခုနှစ်အတွက် ကြိုတင်ဆွဲထားတာဆိုတော့ တချို့ပွဲရက်လေးများ အတိမ်းအစောင်းရှိရင် နားလည်ပေးကြပါ။ လိုအပ်သလို သုံးလို့ရတယ်ဗျာ၊ တတ်နိုင်သရွေ့ စုံအောင်လုပ်ထားပေမယ့် ကိုယ်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်လုပ်ကြတဲ့ ပွဲတော်တွေကြတော့ ကျနော်မသိတဲ့အတွက် မပါမိခဲ့ရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးကြဗျာ ......။
၂၀၀၉ - ခုနှစ် နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။
၁။ ၂၀၀၉-ခုနှစ် မြန်မာပွဲတော်ရက်များ
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:10 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ညီငယ်မောင်မျိုးက TAG ထားတဲ့ အကြိုက်ဆုံးကဗျာတဲ့ ......... အောက်မှာပါ ... မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)ရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ပြောရရင် ကျနော့ဘ၀ရဲ့ ပြယုဂ်လေးပါ။
ပုံပြင်တစ်ခု ဆိုပါတော့ …
တောယံ တောအုပ် ရှိသတဲ့ …။
ချောက်ချား ရင်တုန်စရာပေါ့ …။
ဘယ်မှာ လွယ်လွယ်ရောက်မှာလဲ …။
ကဲ …. ချစ်သူ
မင်းလည်း သွားဝံ့ပါသလား …
“ပြယုဂ်”တစ်ခု ဆိုပါတော့ …။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:59 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
လမ်းဘေးတစ်နေရာမှ လူမဆန်တဲ့ သူဖုန်းစားတွေလက်ထဲက ကလေးငိုသံအကြားမှာ ဘယ်လိုမှ ဖြေဆည်မရနိုင်တဲ့ ......... ကျနော့ရဲ့ မျက်ရည်စက်လေးများကို ကဗျာအဖြစ်ပေါ့ ............
အူဝဲ … အူဝဲ
လူဖြစ်လာရတာလည်း ကလေးရယ် …။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:12 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
မကြိုက်တာအမှန်ဗျ …. :)
ခွေးခြေပု ခုံလေးကို ပလ္လင်လုပ်
မဟုတ်ဘူးဟေ့ … မဟုတ်ဘူး
ငါ ရှုးနေတယ်ကွလို့ ….။
မျိုမချခင် အရှင်ကြီးတွေကို ပ,သ
ဗြုံး …….. ဆို
သူနားမလည်တဲ့ စကားနဲ့ ပြန်နှက်
ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့ အဖြစ်အပျက်ပေါ့ ….။
“သြော် ….. ကျမက စပယ်ယာ မှတ်လို့”တဲ့
“စပယ်ယာထက် ပုံ ပိုတုံးတယ်နော်တဲ့”
ဟို … ကော်ဖီကြော်ငြာလိုပေါ့
ဒယီးဒယိုင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အသာမ
…… မီးပျက်သွားပြီ ………
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:08 PM5ထင်မြင်ချက်(များ)
သံယောဇဉ် ... သံယောဇဉ်
တရှိုက်မက်မက် ဖြစ်နေရလည်းကွယ် ...။
ညတွေက ရောင်နီနဲ့ ရောယှက်
ငါ့ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ် ရောက်ရောက်နေခဲ့ပြီ ....။
ဟော ... ကြည့်လိုက်စမ်း
အခုတော့ ... ဒါဟာ
ငါ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘ၀တခုလိုပဲ ...။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား10:05 AM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ငါ့ …. အားနည်းချက်လား …
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:10 PM5ထင်မြင်ချက်(များ)
ဆတ်ခနဲ နေရာယူတတ်တာ .....
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:19 AM3ထင်မြင်ချက်(များ)
ရွာသားလေးရဲ့ “ဖျားနာခြင်း ချစ်ရည်ရှည်”ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ခံစားမိတာလေးပါ။
ငါ, အသိဆုံးပါကွယ် ….
လေးဖြူရဲ့ B.O.B အခွေလေးနားဆင်ရင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်များပါ ....... ကိုရုပ်ဆိုး
မင်း ထင်ထားခဲ့မှာပေါ့ ……….
မင်း ထင်ထားခဲ့မှာပေါ့ ……….
မင်းရဲ့ တောင်ပံ တစ်ခတ်မှာ
ဇတ်ကနဲ … ပျက်ပြယ်သွားတဲ့
ဘယ်လို အခန်းဆက်ရမှာလဲ ………
တစက်ချင်း ပေးဆပ်ခဲ့တာ ………
နားမဆင်ရဲတာက .. ငါ့အမှားလို့
ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်သွားတဲ့ … ငါ့မျက်နှာ
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:31 PM5ထင်မြင်ချက်(များ)